Maungtintyin: စာနာရိုင်းပင်းတတ်မှုကရုဏာဖြင့် ဘ၀ကို နေထိုင်ပါ
စာနာရိုင်းပင်းတတ်မှုကရုဏာဖြင့် ဘ၀ကို နေထိုင်ပါ
ကရုဏာဟာ ဘာသာတစ်ခုခုရဲ့ ပင်ကိုယ်ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ရပ်တော့ မဟုတ်ပါ။ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက် ဒါဟာ စကြ၀ဠာဆိုင်ရာ ဥပဒေသပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ ပဋိပက္ခတွေ တစ်ဟုန်ထိုး ဖြိုဖျက်ပြိုကွဲနေတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခု (လူအများရဲ့အပြုအမူတွေကို ဆုံးဖြတ် ပြဌာန်းပေးနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုများ- ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိ အဲဒီနေရာ) မှာ- ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်, ဘယ်အဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဘယ်အသက်အရွယ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်, သင်ကြားဖို့ လိုအပ်နေတာကတော့- အတွင်း သန္တာန်မှာ ကရုဏာကို မြေထောင်မြှောက်ပေးဖို့ရာ ဖန်တီးမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့မိသားစုအတွက် လိုအပ်ချက်များစွာကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ အိုးအိမ်နေသူတစ်ယောက်-
လူအများကို တွေ့ဆုံနေတဲ့, သူမရဲ့ကုမ္မဏီနဲ့ စပ်ဆက်နေတဲ့ ရင်ချင်းအပ်ဖက်ထားတဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်- သန်းနှင့်ချီတဲ့ကံကြမ္မာကို ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်မှာ, လွှတ်တော်တင်သွင်းတဲ့ ဥပဒေမူကြမ်းကို အတည်ပြုနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်-
ဒါမှမဟုတ် သူ့ရဲ့ခရီးသည်များနှင့် မြင့်မားတဲ့ နှုန်းထားအတွက် ဈေးဆစ်နေတဲ့ လန်ချား, သုံးဘီး,စက်ဘီးစတဲ့ မောင်းနှင်နေတဲ့သူ တစ်ယောက်-
သင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်- အဲဒါကို ဖြစ်တည်စေပါ။ သင်ဟာ ကရုဏာကို လိုအပ်ပါတယ်။
ကရုဏာဟာ ဖီလိုဆိုဖာများရဲ့ အတွေးအခေါ်များမှာတင် များစွာ မတည်သင့်ပါ။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ (နောက်ဘ၀မှာ) အကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ ဆုလာဒ်များပေါ်မှာသာ မတည်သင့်ပါ။ ကရုဏာရဲ့အသံဟာ အိမ်ထောင်စုတိုင်း- ပညာရေးနယ်ပယ်အားလုံး- ရုံးခန်း- ကုမ္ပဏီ- အလုပ်ရုံ- ဈေး- မော- ရုပ်ရှင်ရုံ - အဲဒါအပြင် အခြားနေရာများ- ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသမျှ ကြားသိရဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ရာစုနှစ်များစွာအတွက် ယခုထိ ခရစ်တော် (ဒါမဟုတ်) ဗုဒ္ဓကဲ့သို့ နှစ်သက်ရာရွေးချယ်ထားတဲ့ အနည်းငယ်ရဲ့ အထူးလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတစ်ခု ဖြစ်ဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကရုဏာကို သီးသန့်ကန့်သတ်ထား ပြီးပါပြီ။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာလည်းပဲ- နေ့စဉ်ဘ၀ရဲ့ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ယှဉ်ပြိုင်ပွဲမှာ- ဒီလို အရည်အသွေးတစ်ခုကို ရှင်သန်နေထိုင် ပုံဖော်နေတဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ အလားအလာကို- အမြင်သဘောထားအပေါ် အခြေတည်၍ အရေးမထားလောက်ဟု သဘောထား ပယ်ချပြီးပါပြီ။
စာနာရိုင်းပင်းတတ်မှုကရုဏာနဲ့နေရတာဟာ အလွန်ခက်ခဲသလား? ဒါမှမဟုတ် အကျွန်ုပ်တို့က အဲဒီ အဆင့်အတန်းများထိ အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကို မမြှင့်တင်နိုင်တာက ကျွန်ုပ်တို့ တကယ်ပဲ စွမ်းရည် မရှိတာလား?
ကရုဏာဟာ စာနာကြည့်ခြင်း မျှဝေခံစားခြင်းဖြင့် စတင်ပါတယ်။ စာနာကြည့်တာဟာ အခြားသူများအတွက် စိတ်ထိခိုက်စွာ ခံစားကြည့်တတ်တဲ့ စွမ်းရည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘ၀ရဲ့လှုပ်ရှားမှု (နာကျင်မှုနှင့် သာယာမှုရဲ့ အတွေ့အကြုံများ) အတွက် စာနာနားလည်တဲ့သူဟာ မျှဝေခံစားနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
သူတို့ရဲ့အတွေးများရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ဂရုတစိုက် သတိထားတဲ့သူ- မလိုလားအပ်တဲ့အတွေးများရဲ့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုကို လေ့လာဂရုပြုနေတဲ့သူ- ပြီးတော့ ကွဲပြားဆန့်ကျင်နေတဲ့ အတွေးများရဲ့ နာကျင်မှုကို စောင့်ကြည့်ပြီးတဲ့သူ- ဒီသူဟာ အဲဒါကို ကောင်းစွာ ခွဲခြားသိမြင်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ တစ်ရှိန်းထိုးထောင်ခနဲထတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အာရုံစိုက်ပြီးတဲ့သူ-
ဒေါသ,စိတ်ထိခိုက်ခြင်း (ဒါမှမဟုတ်) အမုန်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းများကို မလိမ္မာမပါးနပ် မရှင်းမလင်း ဗလုံးဗထွေးနိုင်တာကို သတိထားပြီးတဲ့သူ-
ကြောက်လန့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆင်ခြင်တုံတရား မရှိ အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာကို အထူးဂရုပြုပြီးတဲ့သူ-
အဲဒီသူဟာ အလားတူ စိတ်ခံစားမှု အဆင့်ဆင့်ကို ဖြတ်သန်းနေတဲ့ အခြားသူများအတွက် စာနာစိတ်ဖြင့် မျှဝေခံစားပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကရုဏာဟာ မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘ၀အတွေ့အကြုံများကို ဂရုတစိုက်သတိထားမိခြင်းဖြင့် စတင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ (ဒါမှမဟုတ်) ခံစားမှုမှာ အဲဒါကို ဖြစ်တည်ပါစေ။
ဤသို့ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ စာနာခြင်းနှင့် ကရုဏာဟာ - အခြားသူများကို လက်ကမ်းဖို့ ကြင်နာမှုရဲ့အပြုအမူများ အလိုအလျောက် ဖွံ့ဖြိုးဝေဆာလာပါလိမ့်မယ်။
အခြားသူများရဲ့ချမ်းသာသုခဟာ ကရုဏာရှင်တစ်ယောက်အတွက် အမြင့်မားဆုံးဦးစားပေးကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူမရဲ့အပြုအမူဟာ ကြီးမားတဲ့အသိပညာ- ခံနိုင်ရည်ဇွဲ- လိမ္မာသိုသိပ်မှုကို ဂယက်ရိုက် ရောင်ပြန်ဟပ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့သူရဲ့ ကောင်းကျိုးမပြုတဲ့ အခြေအနေကို ပြောင်းလဲအစားထိုးဖို့ လုပ်ဆောင်ချက်ထဲသို့ နစ်ဝင်သွားတဲ့ ရွေ့လျားအား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် အရှိန်အ၀ါအင်အားရဲ့ ညင်သာသိမ်မွေ့တဲ့စကားလုံးများလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအတွက် အူလှိုက်သည်းလှိုက် ဆုတောင်းပတ္ထနာ ပြုမှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကရုဏာဟာ ပျော့ညံ့ခြင်း မခိုင်မာခြင်း အားနည်းခြင်းရဲ့ သံချပ်ကာ ကျည်ကာ ချပ်ဝတ်တန်ဆာတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာ သန်မာတဲ့လက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါသနှင့် အကြမ်းဖက်မှုက အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကို ယူဆဖို့ ယုံကြည်ဖို့ ဟောကြားဖို့ တာဝန်မရှိတော့ပါ။
လူအများအကြား နားလည်မှုများနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာများ ကင်းမဲ့နေမှုကြောင့် အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ အဆင့်မှာဖြစ်စေ အလွန်သေးငယ်တဲ့အဆင့်မှာဖြစ်စေ ပြဿနာများက ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ အခြေအနေအရင်းခံဗဟိုပြုတဲ့ ပြဿနာများက စိတ်ခံစားမှုအရင်းခံဗဟိုပြုတဲ့အရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရာပါက အလွန်းပဲနည်းပါးပါတယ်။
အခြေအနေအရင်းခံဗဟိုပြုတဲ့ ပြဿနာများဟာ အကောင်းဆုံးမဟာဗျူဟာကို လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒါကို ဖြေရှင်းဖို့ ကျွမ်းကျင်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ခံစားမှုအခြေစိုက်တဲ့ ပြဿနာများကတော့- သူတို့ကို အကြောင်းခံဖြစ်နေတဲ့ အဲဒီဆန့်ကျင်ဘက်စိတ်ခံစားမှုမှ ဖယ်ရှားခြင်းမှာ- သက်ဆိုင်ပါဝင်တဲ့လူများကို လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အပြောင်းအလဲများကို ဒေါသနှင့်အကြမ်းဖက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဘယ်တော့မှ သက်ရောက်မှုအကျိုးရလဒ် မရှိပါ။ ကရုဏာဟာ အဖြေပါပဲ။
စူးစိုက်နှစ်မြှုပ်ထားမှုဖြင့် အသိနိုးကြားစွာ ကရုဏာရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးကို အကျွန်ုပ်တို့ ပြုစုပျိုးထောင် ကြပါစို့!
အပြုံးများ- မျက်ရည်များ- ချစ်ခင်တွယ်တာမှုနှင့် အမျက်ဒေါသများဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာထဲ လမ်းသွားရင်း ၀င်တိုက်မိနေတဲ့လူအများရဲ့မျက်နှာကို အကျွန်ုပ်တို့ ကြည့်ကြပါစို့!
ကရုဏာဖွံ့ဖြုိးဝေဆာလာတာကို ခွင့်ပြုဖို့ သူတို့ရဲ့ခံစားမှု စိတ်နှလုံးသားများအပေါ် အကျွန်ုပ်တို့ ကမ္မဌာန်းပွါးများကြပါစို့!
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Thursday, July 14, 2011
သစ်တောများကို ဘာ့ကြောင့် ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြရတာလဲ...
အကျွန်ုပ် ယုံကြည်ချက်ကို ပြောင်းလဲသင့်ပါသလား?